Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Olona dimy naratra tao amin'ny bus bus nijanona nanapoaka baomba mpampihorohoro
Fipoahana teo amin'ny fiantsonan'ny bus ao Santiago, renivohitr'i Chile, no nandratra olona dimy farafaharatsiny. Ny fipoahana dia nitranga fotoana fohy talohan'ny antoandro ny ora teo an-toerana ny zoma, teo amin'ny fihaonan'i Avenida Vicuña Mackenna sy Av. Francisco Bilbao, ao afovoan-tanànan'i Santiago. Ny iray tamin'ireo olona dia nikasika kitapo sisa tavela teo amin'ny fiantsonan'ny bus, izay niteraka ny fipoahana, hoy ny polisy.
Ireo tsirairay izay mirona any amin'ny ala (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje - ITS), vondrona mpampihorohoro dia nilaza fa tompon'antoka tamin'ny fanafihana tranokala, hoy ny gazety La Tercera.
Ny mpampanoa lalàna Claudia Cañas, izay mitarika ny famotopotorana, dia tsy afaka nanamarina ny filazan'ilay vondrona, fa nilaza kosa fa “efa voadinika avokoa ireo fitarihana rehetra”
Ny minisitry ny atitany Andrés Chadwick dia mitsidika ireo maratra ao amin'ny hopitaly. Ny ben'ny tanànan'i Santiago, Evelyn Matthei, dia nilaza tamin'ny haino aman-jery tany an-toerana fa ny toe-javatra dia manondro ny "fikasana hanao ratsy".
Lehilahy telo sy vehivavy roa no naratra tamin'ilay fipoahana, hoy ny jeneraly Enrique Monrás ao amin'ny Carabineros, polisy Chiliana. Ny iray amin'ireo vehivavy dia maratra mafy kokoa, saingy tsy misy ny fepetra manambana ny ainy raha ny fahalalany azy, hoy i Monras.
Anisan'ireo naratra ny mpivady avy any Venezoelà, hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Mbola mikatona ny fifamoivoizana na ny fivezivezena sy ny fiara aza ny sampanan-dalana raha manangona porofo ny polisy.
Manana lafiny maizina ny paradisa fizahan-tany any Hawaii: olona 117 no maty tamin'ny taona 2018